AIMS အသင်းဝင်များသည် VidTrans17 ၌အောင်မြင်သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွင်ပါဝင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဖွဲ့ဝင်များ VidTrans17 မှာအောင်မြင်သောအော်ပရေးရှင်းအားထောက်ကူရည်ရွယ်
BOTHELL, ရေချိုး - ။ မတ်လ 29, 2017 - The interop session, which was sponsored by Video Services Forum (VSF) and concluded at VidTrans17 Feb. 28 – March2in Los Angeles မြို့အဆိုပါမူကြမ်းများ၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းမိတ်ဆက်ပြသ SMPTE 2110 စံနှင့် AMWA တစ်ဂရုတစိုက်ဗိသုကာပညာရှင် IP ကိုပဏာမခြေလှမ်းအဖြစ်-04 IS ။ အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ရည်ရွယ်သည်) ယနေ့အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော် compressed လုပ်မထားတဲ့ဗွီဒီယိုနဲ့အသံပို့ဆောင်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသရုပ်ပြ၎င်း၏အကျဉ်းချုပ်ကြေညာခဲ့သည်။
VidTrans17 အထိဦးဆောင် 19 အဖွဲ့ဝင်များအဆိုပါ Woodlands, တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက် Fox ကနည်းပညာဆိုင်ရာစင်တာမှာ VSF-sponsored အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူရည်ရွယ်သည်။ ကသင်တန်းသားများကိုတစ်သိသိသာသာအရေအတွက်၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအပေါ်အထူးအာရုံစူးစိုက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါစမ်းသပ်ခြင်း, မကြုံစဖူးခဲ့သည် SMPTE ST-2110 မူကြမ်း။ အဖွဲ့ဝင်များကရည်ရွယ်ထားခဲ့သည် 21 ဘယ်သူကို၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 19 ရောင်းချသူ, ကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အဓိကကသူတို့ပစ္စည်းကိရိယာများမှချိန်ညှိသို့မဟုတ်ကွန်ယက်မရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေလက်ခံရရှိနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ရပ်အပြီးတွင် 12 အဖွဲ့ဝင်များကမိမိတို့၏မူကြမ်းပြရည်ရွယ် SMPTE VidTrans2110 မှာအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ session တစ်ခုအတွက် ST-17 စနစ်များကို။ ရလဒ် display ကိုအပေါ် ရှိ. , တိုးတက်မှု, အရှင်ဝေးရောနှောရောင်းချသူနှင့်တက်ရောက်လာအကြားပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြုသဘောသဘောတူညီမှု generated ။
အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အကြောင်း
အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions (ရည်ရွယ်သည်) အတွက်မဟာမိတ်တစ်ဦးမဟုတ်-များအတွက်အကျိုးအမြတ်ပညာရေးထံအပ်နှံအဖွဲ့အစည်းအသိအမြင်နှင့် IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦကျော်ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးအချက်အလက်များ၏ transmission အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများမြှင့်တင်ရေးအဖြစ်ထုတ်ကုန်အခြေစိုက်ဖြစ်ပါသည် သူတို့အားစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်မှာ။ အဆိုပါအုပ်စုတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လျင်မြန်စွာဖွင့်လှစ်ရန်ဆင့်ကဲ, ခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်စွယ်စုံထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ enable ကြောင်းအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဖြေရှင်းချက်မှတဆင့် SDI ကနေ IP ကိုရန်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အကူးအပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ကတိကဝတ်များကိုမျှဝေကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများနှင့်နည်းပညာကိုပေးသွင်းများ၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ရည်မှန်း အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အော်ပရေးရှင်း multivendor SMPTE 2110 နျ Standard စမ်းသပ်ခြင်း က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် VidTrans17 2017-03-31
နောက်တစ်ခု: အကျိုးအမြတ်မယူသော Marin တီဗီမှာ Marin အသုံးချဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Cross-Converter ၏အဝန်း Media Center ကို